0 Sunday February 02, 2020 - 21:39:00
Ururka Al Qaacidda ee Jaziiradda Carabta ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar saraakiil American ah oo bishii December 2019 ka dhacay saldhig kuyaal gobolka Florida ee dalka Mareykanka.
0 Saturday February 01, 2020 - 16:39:22
0 Saturday February 01, 2020 - 12:43:40
Kadib weeraro isdaba joog ah oo Xoogaga Al Shabaab ay bilihii lasooa dhaafay ka fulinayeen deegaanno katirsan dhulka Soomaalida NFD ee Kenya gummeysato ayay xirmeen dhammaan iskuulladii gacanta dowladda kujiray.
0 Thursday January 30, 2020 - 22:05:12
Dowladda Mareykanka ayaa markale war kasoo saartay weerarkii khasaaraha badan dhaliyay ee horraantii bishan ay xoogaga Al Shabaab ku qaadeen saldhig ciidamada Mareykanka uga sugnaayeen dalka Kenya.
0 Thursday January 30, 2020 - 19:27:57
Bayaan kasoo baxay Xafiiska Warfaafinta Al Shabaab ayaa lagu bogaadiyay halganka Jihaadiga ah ee jamaacadda Nusratul Islaam Walmuslimiin ay kawaddo galbeedka qaaradda Afrika.
0 Thursday January 30, 2020 - 16:26:24
Ciidamo huwan ah ayaa markale deegaan katirsan gobolka Jubbada dhexe dhibaato ugu geystay dad shacab ah.
0 Thursday January 30, 2020 - 12:07:24
Weeraro hubaysan oo dhaliyay khasaara dhimasho iyo dhaawac leh ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay qaar kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir.
0 Sunday January 26, 2020 - 10:46:10
Wadanka Shiinaha waxaa ka dilaacay cudur dilaa ah oo lagu magacaabo Coronavirus waa cudur si dhakhsi ah laysku qaadsiinayo wuxuuna durbadiifa ku faafay wadamo ka baxsan Shiinaha sida Faransiiska,Sacuudiga iyo Malaysiya.
0 Saturday January 25, 2020 - 21:39:46
Beesha Habas-Guul oo kamid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa Ugaas cusub ku caleema saaratay magaalada Bu'aale ee Wilaayada Jubooyinka.
0 Thursday January 23, 2020 - 21:45:41
0 Thursday January 23, 2020 - 21:13:14
Inkastoo maamulka Madaxweyne Farmaajo uu mar weliba sheego horumar laga gaaray dhanka maaliyadda, isla xisaabtanka iyo dib u habeynta hey'adaha dhaqaalaha, xiriir wanaagsanna uu kala dhaxeeyo hey'adda IMF-ta iyo bangiga adduunka, hadana taasi kama saarin liiska ugu hooseeya musuqa adduunka ee…
0 Tuesday January 21, 2020 - 15:31:07
Iyadoo ay weli sii socoto burburinta Ciidanka Kenya ay ku hayaan xarumaha Shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliya ee gobollada Jubbooyinka iyo Gedo ayay ciidamada Kenya waxay mar labaad bur buriyeen xarun ku taalla deegaanka Jaldeyse oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya.
0 Sunday January 19, 2020 - 18:03:49
0 Saturday January 18, 2020 - 11:14:48
0 Thursday January 16, 2020 - 18:54:16
0 Wednesday January 15, 2020 - 14:16:12
Hal sano oo kaamil ah ayaa kasoo wareegtay markii uu dhacay weerarkii Hotelka DusitD2 ee magaalada Nairobi halkaas oo lagu laayay dad farabadan oo isugu jiray Kenyaan iyo Reergalbeed.
0 Wednesday January 15, 2020 - 11:58:59
Xaalad adag oo dhanka nolosha ah ayaa lasoo daristay boqolaal kun qoysas danyar ah oo ku dhaqan qaar kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir.
0 Tuesday January 14, 2020 - 11:11:57
Dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah u xaqiijisay in weerarkii sedaxda sarkaal Americanka ah lagu dilay bishii lasoo dhaafay uu ahaa " Fal Argagaxiso".
0 Tuesday January 14, 2020 - 10:15:09
0 Sunday January 12, 2020 - 11:05:58
0 Saturday January 11, 2020 - 20:28:57
Waxaa sii kordhaya walaaca ay mas'uuliyiinta Americanka ah ka muujinayaan weerarkii khasaaraha badan dhaliyay ee dagaalyahanno katirsan Al Shabaab ay dhowaan ku qaadeen gudaha wadanka Kenya.
0 Saturday January 11, 2020 - 09:53:15
Mas'uuliyiinta ugu sarraysa taliska ciidanka Mareykanka qaaradda Afrika ayaa booqasho kadis ah ku tagay saldhigga Simba Camp ee gacanka Manda Bay oo isbuucii lasoo dhaafay uu ka dhacay weerar askar American ah lagu dilay.
0 Thursday January 09, 2020 - 16:40:39
0 Wednesday January 08, 2020 - 20:13:44
Degmada Tiyeeglow oo ka mid ah degmooyinka lagu xukumo shareecada Islaamka isla markaana ah degmo caan ku ah beeraha iyo soo saarista malabka ayaa laga bilaabay dhismaha masjid jaamac wayn oo ay yeelanayso degmadu.
0 Tuesday January 07, 2020 - 20:54:09
Dowladda Mareykanka ayaa faafisay macluumaadka shakhsiyadeed ee mid kamida askartii looga dilay weerarkii aadka uxooganaa ee Axaddii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka Lamu ee dalka Kenya.
0 Monday January 06, 2020 - 11:35:34
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar xagga cirka ah oo diyaaradaha dagaalka dowladad Kenya ay ka geysteen deegaan kulaala xuduu beenaadka uu gobolka Jubbada Hoose lawadaago dhulka NFD ee Kenya gummeysato.
0 Monday January 06, 2020 - 07:42:20
Al Shabaab oo sheegtay in 17 askari American ah ay ku dishay Weerarkii Lamu Kenya [Bayaan].
0 Sunday January 05, 2020 - 19:00:06
Waxaa soo gaba gaboobay weerarkii aadka u xooganaa ee saaka aroortii hore ka bilaawday saldhigga Melleteri ee Simba Camp kaasi oo ku yaal gacan Manda Bay ee gobolka Lamu dalka Kenya.
0 Sunday January 05, 2020 - 17:50:56
Professor John Mearsheimer, kana mid ah faaliyeyaasha arrimaha siyaasadda ee caalamiga (International Relations) bare sarena ka ah Jaamacadda Chicago ee carriga Maraykan ayaa qaba in Trump uusan ku guuleysan karin haddii uu damco in uu weeraro Iiraan ama meelo kale oo caalamka ka mid ah, waayo ayuu…
0 Sunday January 05, 2020 - 11:30:44
Mu'asasada Al Kataa'ib ayaa faafisay sawirro hodhac ah oo muujinaya dagaalyahanada Al Shabaab oo ka dagaallamaya gudaha saldhigga ciidanka Mareykanka ee Lamu.
0 Sunday January 05, 2020 - 06:42:32
War goordhow kasoo baxay xafiiska warfaafinta Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in aroornimadii hore ee saaka oo Axad ah ciidamada aad u hubeysan oo katirsan guutada Istish-haadiyiinta ay weerar xoogan ku qaadeen saldhig ay wada dagan yihiin ciidamada badda Mareykanka iyo kuwa Kenya,…
« Prev1 ... 45678910 ... 44Next »